Ho an’Andriamatoa Rajoelina Andry, Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Antananarivo, faha-30 Jolay 2020
Ho an’Andriamatoa Rajoelina Andry
Antony : Taratasy misokatra – Ady amin’ny valanaretina Covid-19
Efa-bolana isika izao no anaty ady mafy handresena ny valanaretina Covid-19. Mitondra ny tsimokaretina ny 25 % n' ireo Malagasy natao fitiliana. Betsaka izany. Maro koa anefa no sitrana : 70 % ireo voamarina fa marary no tena sitrana, maherin’ny 29 % ireo an-dalam-pahasitranana ary latsaky ny 1 % no maty. Azo sorohina sy tsaboina tsara izany izy io !
Ankasitràhana ny ezaka rehetra efa ataonao sy ny mpiara-miasa aminao ho fiarovana, fitsaboana, fampitaovana, fanampiana ireo sahirana ary ny fanohanana ataonao ho an'ny sehatry ny asa sy ny famokarana.
Deraina koa ny vahoaka Malagasy manaiky hatrany ny fandaminana, na dia eo aza ny fahasahiranana aterak’ireo fepetra tsy maintsy arahana mba tsy hipariahan’izany valanaretina izany. Iaraha-mahita ihany koa anefa fa mbola maro ireo izay tsy manaja ny fepetra hiarovana ny aina sy ny mpiara-belona, ary mbola mila fifanentanana sy fifanomezan-tànana hatrany izany.
Hafa mihitsy anefa isika Malagasy.
Na izany aza, rehefa zohina ny fivoaran'ny antontanisa, miohatra amin'ny halavan'izay fotoana nihibohana izay, dia iaraha-mahita ihany koa fa sarotra ahitam-bokatsoa ny fepetra noraisina hatrizay noho ny antony maro. Raha izao no mitohy dia ahiana sy ampoizina fa ho tena mafy fiantraika noho izao efa iainana izao ny fahasimbana eo amin'ny lafiny maro :
(i) hitontongana hatrany ny toekarempirenena,
(ii) hihamafy ny fahantrana ka ny sokajy antonontoniny hiha marefo, ireo marefo kosa ho fadiranovana ka ahiana ny ainy,
(iii) ho maro ireo very asa, satria hitombo ny seha-pihariana hanidy trano na/sy handroaka mpiasa,
(iv) hirongatra saro-pehezina ny tsy fandriam-pahalemana ary mety ho setraina fampiasan-kery izany, ka sanatria hitondra amin'ny korontana,
(v) raha tsy voatandrina ny lafiny maro (politika, fifandraisana, fampiasana fahefana sy hery...) dia ahiana hanimba ny firaisankina efa marefo ka hampisara-bazana ny samy Malagasy.
Manoloana izany, ny Roso ho amin’ny Demokrasia Sosialy (RDS), dia mampahery ny Fitondrana ary tsy mitsahatra manao antso am-pitiavana, noho ny tanindrazana iombonana, ny firenena iaraha-manana, ary indrindra ny rà iraisana samy malagasy, manoloana izao aretin-doza sy atambo izao, mba hisokafany amin’ny fifampidinihina.
Tsy handrombaka Fitondrana akory na handramby ny tsy anjaran'ny tena fa hitondra hevitra, hivoy firaisana – ho fakan-kevitra sy « tongotra miara-mamindra » - amin'ireo sokajy sy vondrona miantsoroka andraikitra amin’ny fiainam-pirenena.
Iaraha-manana ny firenena. Iombonana ny ady ary tokana ny fahavalo araka ny hafatra ombieny ataonao. Ny Fitondrana kosa izay misalotra ny fahefam-bahoaka no mandravina ny « hevitra tera-bary » sy maka ny fanapahan-kevitra farany ary mandrindra ny asa.
Singanina amin’izany ireto voatanisa ireto :
(a) Mpitsabo, Mpitsabo Mpanampy na sivily na miaramila, Tekinisianina, Fikambanana sy mpiara-miombonantoka misehatra amin'ny fahasalamana sy ny « vonjy voina », mba hiara-mandinika ny fomba hialàna haingana amin’ny fihibohana, izay tsy voahaja antsakany sy andavany, fa indrindra ireo fepetra sy fomba sahaza izany,
(b) Firaisamonimpirenena manana talenta sy fahaiza-manao amin'ny fanentanana sy fibeazana ny mpiray monina. Ilaina indrindra izany hanorenana ny fototra fiaraha-miaina amin'ny fanajana lalàna sy ny fepetra ara-pahasalamana, ny firotsahana bebe kokoa amin'ny fifehezana ny tsy fiparitahan’ny tsimokaretina be loatra, ary ny hanolokoloana fifampitondrana mifanaja, miala amin'ny fifampihantsiana sy fifandranitana mandoza firenena,
(d) Tompona orinasa tsy miankina, sehatra miahy tena sy ireo Sendikalista, handaminana ny fiarovana ny orinasa mbola tsy rendrika, ny fampandehanana indray ireo orinasa sahirana sy efa nitsahatra tamin’ny asany, noho izao valanaretina izao. Tsy ho adinoina ny momba izay fepetra sy fenitra ara-pahasalamana eny amin’ny toeram-piasana tsirairay,
(e) Mpitarika sy Mpiandraikitra politika, na avy aiza na avy aiza, hizarana sy hampahafantarana ny toe-draharaha ankehitriny mba samy hitompo andraikitra amin'izao toetr'aretina tsy mifidy halavo izao. Antenaina sy inoana fa hampitsahatra ny fifanenjehana sy fifanaratsiana mamono firenena izany, ary hitondra fitoniana ankapobeny ka hampihena ny vesatra amin'ny fiainam-bahoaka,
(f) Mpitandro ny filaminana, hijoro ho fakan-tahaka ary ho kiadin'ny firenena. Mila namana izy ireo amin'ny fiaraha-miasan'ny hery rehetra mba hampahomby ny asany amin'ny fanaraha-maso sy ny fampiharana ny lalàna sy fepetra ara-pahasalamana.
Azo tanterahina ao anatin’izao andiana fihibohana faha-10 izao izany ka ny vokatra hivoitra eo – toy ny fialàna amin’ny fihibohana tanteraka sy ny fametrahana ireo fepetra sahaza – dia heverina ho azo hampiharina manomboka amin’ny herinandron’ny faha-10 aogositra 2020.
Hihamazava sy hirindra kokoa ny andraikitry ny rehetra noho izany, hitompo andraikitra sy hirotsaka amin-kerimpo ny rehetra, hiteraka fifanajana sy fiombonana ara-tsaina eo amin’ireo mpiantsehatry ny fiainam-pirenena izany, ho fanoitra hanainga ny hambom-pirenena iombonana ihany koa ary indrindra handresena haingana ny valanaretina Covid-19 sy ny fahantrana naterany izay mahamay antsika indrindra ankehitriny.
Raiso, Andriamatoa Filohampirenena, ny haja ambony atolotra anao.